China CGSZ2042 Mpanamboatra sy mpamatsy milina roa vera | SUNKON
Rafitra fanaraha-maso: PLC
Fanamarinana: Toy ny baiko
Min. Baiko: 1 SET
Seranan-tsambo: Shunde, Guangzhou, Shenzhen, Sina
Fahaiza-mamokatra: 50 set / volana
Fonosana: Nofonosin'i PE. Sarimihetsika na boaty Play-hazo
Fepetra fandoavana: T / T, L / C, Western Union, sns
Vanim-potoana Warranty: Herintaona
Vidiny: Raiso ny vidiny farany
■ Ny ambany sy ny marindrano fitaratra misy ny tsipika mahitsy dia azo zahana indray mandeha amin'ny fikosoham-bolo, amin'ny fikosoham-bolo ary amin'ny fametahana pneumatika.
■ Napetraka miaraka amin'ny torolàlana tsara sy mandria mandroritra izay manome antoka ny fametrahana mazava tsara. Ny bracket an'ny rafitra mihetsika dia ny famolavolana endrika W, izay mampitombo ny fahamendrehan'ny hetsika sy ny haavon'ny fahamendrehana; Izy io koa dia afaka manitatra ny androm-piainan'ny talantalana.
■ Ny rafitra rehetra ao anaty iray ho an'ny milina sy boaty boribory dia tsara ho an'ny tantera-drano, fitsitsiana habaka ary mety amin'ny fandidiana. Ny vatana lehibe dia mandray vy vy amin'ny fitsaboana annealing.
■ Ny fanatsarana pneumatika nohatsaraina dia mampiasa ny lalamby mpitari-dalana avo lenta ho an'ny fitarihana ary ity rafitra ity dia afaka mampiorina kokoa sy azo itokisana ny poloney, ary koa hamonjy ny kodiarana fitotoam-bolo.
■ Ny fitaovana voahitsy dia napetraka ao amin'ilay masinina, izay mamaha ny olan'ny vera kely, ary mahatsapa fa tena marina ny fiasan'ny masinina mifandray rehefa mamindra fitaratra.
■ Ny halaviran'ny andry gazety ambony dia lehibe hanoloana mora ny kodiarana.
■ Ny fifehezana PLC miaraka amin'ny efijery mikasika, ny fametrahana ny angon-drakitra ary ny fitaratry ny fitaratra dia azo aseho amin'ny foibe mifehy. Ny sakany, ny hateviny ary ny fampiakarana ny arris ambony dia ahitsy ho azy. Spindle 20 tanteraka, spindles 10 isaky ny lafiny.
Ny hatevin'ny fitaratra
Min. Habe voahodina 350 * 350 mm
Max. habe voahodina 4200mm (CGSZ2042)
Hafainganam-pandeha 1 ~ 8 m / min